လက်မထပ်ခင် လူပျို အပျို စစ်စစ် အဖြစ် ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ဆယ်လီ ၁၅ ဦး | Buzzy
ဘယ်သူတွေများ ဖြစ်မလည်း ?
Kevin နဲ့ အတူ ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်ကြတဲ့ နစ် နဲ့ ဂျိုးတို့ဟာလည်း အိမ်ထောင်မပြုခင်ထိ လူပျိုရည်ကို ထိန်းထားမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ကြဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Kevin တစ်ခုတည်းသာ အသက်၂၂ အရွယ် သူ အိမ်ထောင်ပြုချိန်ထိ လူပျိုရည်ကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Kevin နဲ့ အတူ ညီအဈကိုတှဖွေဈကွတဲ့ နဈ နဲ့ ဂြိုးတို့ဟာလညျး အိမျထောငျမပွုခငျထိ လူပြိုရညျကို ထိနျးထားမယျလို့ ကတိပွုခဲ့ကွဖူးပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ Kevin တဈခုတညျးသာ အသကျ၂၂ အရှယျ သူ အိမျထောငျပွုခြိနျထိ လူပြိုရညျကို ထိနျးထားနိုငျခဲ့ပါတယျတဲ့။
Carrie ဟာလည်း ကနေဒီးယန်း ဟော်ကီကစားသမား Mike Fisher နဲ့ လက်မထပ်ခင် ၂၀၁၀ ထိ အပျိုရည်ကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Carrie ဟာလညျး ကနဒေီးယနျး ဟျောကီကစားသမား Mike Fisher နဲ့ လကျမထပျခငျ ၂၀၁၀ ထိ အပြိုရညျကို ထိနျးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Julianne Hough ဟာလည်း လက်မထပ်ခင်ထိ သူမရဲ. အပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Julianne Hough ဟာလညျး လကျမထပျခငျထိ သူမရဲ. အပြိုစငျဘဝကို ထိနျးသိမျးထားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူမကတော့ ဗစ်တိုးရီးယား စီးခရက်ရဲ. မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ. ခင်ပွန်းသည်နဲ့ လက်ထပ်ချိန် အသက် ၂၇ ထိ အပျိုရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ ဗဈတိုးရီးယား စီးခရကျရဲ. မျောဒယျတဈဦးဖွဈပွီး သူမရဲ. ခငျပှနျးသညျနဲ့ လကျထပျခြိနျ အသကျ ၂၇ ထိ အပြိုရညျကို ထိနျးသိမျးထားခဲ့ပါတယျ။
ဘာသာေ၇းကိုင်းရှိုင်းလွန်းတဲ့ ဘောလုံးသမား Tim တစ်ယောက် ဒီစာရင်းထဲ ပါဝင်နေတာ သိပ်တော့ အံ့သြစရာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးလှနျးတဲ့ ဘောလုံးသမား Tim တဈယောကျ ဒီစာရငျးထဲ ပါဝငျနတော သိပျတော့ အံ့သွစရာ ရှိမယျ မထငျပါဘူး။